काठमाडौँमै घ’ट्यो अर्को हृदयस्पर्शी घ’टना ! आफ्नै बाबुले गरे दुई छोराको अप’हरण ? आमा रुँदै मिडियामा (हेर्नुस् भिडियो) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/काठमाडौँमै घ’ट्यो अर्को हृदयस्पर्शी घ’टना ! आफ्नै बाबुले गरे दुई छोराको अप’हरण ? आमा रुँदै मिडियामा (हेर्नुस् भिडियो)
काठमाडौँमै घ’ट्यो अर्को हृदयस्पर्शी घ’टना ! आफ्नै बाबुले गरे दुई छोराको अप’हरण ? आमा रुँदै मिडियामा (हेर्नुस् भिडियो)
2,2052minutes read
स्याङ्जा घर भई हाल काठमाडौँ बस्दै आएका जगदिश भट्टराई नाम गरेका बाबुले ४ महिनादेखि आफ्ना दुई छोराको अप’हरण गरेर फ’रार भएको उनकी पत्निले आ’रोप लगाएकी छिन् । लमजुङकी अनिता सुयलसँग सुरुमा लिभिगं रिलेशनमा रहेका जगदिशले जेठी पत्नि अनितालाई धोका दिएर स्याङ्जामा धुमधामले दोस्रो विबाह गर्दै बुबा आमालाई पनि ढाँटेका थिए ।
समय क्रमले केही समयमा अनितालाई जगदिशले पहिले नै विबाह गरिसकेको र उनीबाट एउटा वच्चा पनि जन्माइसकेका कारण जगदिशले दोस्रो पटक विबाह गरेकी पत्निलाई डिर्भोस दिएका छन् । तर पनि उनले अनितालाई सुखले कहिल्यै नराखेको अनिताले बताएकी छिन् । मा’दक प’दार्थ से’वन गरेर श्रीमानले शा’रीरिक या’तना दिने गरेको पनि अनिताले बताएकी छिन् ।
अनिताले अहिले आफ्ना दाजुको छोरालाई पनि पतिको सहमतिमा नै आफ्नो छोरा मानेर जन्मेको दिनदेखि नै साथमा नै राखेर हुर्काउँदै आएकी थिइन् । तर जगदिशसँग सम्बन्ध बिच्छेदको प्रक्रिया अगाडी बढाइरहेकी अनिलाई झुक्याएर जगदिशले दुवै छोरालाई लिएर अहिले लुकेर बसेको अनिता बताउँछिन् । अन्तरवार्ता अवधीभर धेरै समय रोएकी अनिताको दु:ख र उनले सहेका पि’डा अत्यन्त मर्मस्पर्शी छन् ।
दुई छोरालाई छिटो भन्दा छिटो आफ्नो सामु देख्न पाउँ भन्ने इच्छा प्रकट गर्दै अनिताले मिडियालाई शक्दो पहल गरिदिन आग्रह गरेकी छिन् । एकपल पनि बच्चा बिना बस्न नसक्ने अनिता अहिले आफ्नो मुटुको टुक्रा अचानक त्यसरी बाबुले अप’हरण गरेर लाँदा उनको जीवनमा ठुलो बज्रपात आइपरेको छ । अनिताको जीवनमा गुज्रिएको यो हृदयस्पर्शी घ’टनाको बारेमा भिडियोमा उनीबाटै सुन्नुस् :
प्रायः मानिसहरूलाई भुटेको मकै मन पर्छ। खाजाका रूपमा खाइने भुटेको मकैले मानव स्वास्थ्यमा विशेष फाइदा पुर्याहउने गर्छ । यसमा फाइबरको मात्रा अधिक हुन्छ। जसका कारण पाचन प्रणालीमा सुधार गर्छ। भुटेको मकै खाने मानिसलाई एसिडिटी र कब्जियतको कहिल्यै समस्या हुँदैन। भुटेको मकैमा आइरन, कपर, र फस्फोरस र म्याग्नेसियमको मात्रा पर्याप्त हुने भएकोले शरीरमा हड्डीलाई मजबुत बनाउँछ । यसमा आइरन, भिटामिन बी १२, फोलिक एसिडको मात्र पर्याप्त हुन्छ। यसले शरीरमा रगत अभावको समस्याबाट जोगाई कमजोरी हुनबाट बचाउँछ।
भुटेको मकैमा भिटामिन सी, केरोटिनाईड, बायोफ्लेविनाईड हुन्छ जसले रक्त प्रवाहलाई तीव्र बनाई रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ । यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। मुटु रोगको खतराबाट बचाउँछ। भुटेको मकैलाई तातो पानीमा केही बेर उमाल्नुहोस् ।यस पानीलाई छानेर मिश्रि मिसाएर खाँदा पिसाब पोलेको वा किड्नी कमजोरीको समस्या समाधान हुन्छ। भुटेको वा पोलेको मकैमा कार्बोहाइड्रेटको मात्र पर्याप्त हुने भएकोले यसले शरीरलाई पर्याप्त ऊर्जा दिन्छ। भुटेको मकै खाँदा दाँतको व्यायाम गराउँछ। मकै खादा दाँत सफा गर्ने र बलियो बनाउँछ।
भुटेको मकैमा फाईबरको मात्रा अत्यधिक हुने भएकाले पाचन प्रणालीमा सुधार गर्छ। भुटेको मकै खाने मानिसलाई एसिडिटी र कब्जियतको समस्या हुँदैन्। भुटेको मकैमा आइरन, कपर, र फस्फोरस र म्याग्नेसियमको मात्रा प्रर्याप्त हुने भएकोले शरिरका हड्डीलाई बलियो बनाउछ। भुटेको मकैमा आईरन, भिटामिन बी १२, फोलिक एसिडको मात्र प्रर्याप्त हुन्छ। जसले शरिरमा रगत अभावको समस्याबाट हुन दिंदैन र कमजोरी हुनुबाट बचाउँछ। भुटेको मकैमा भिटामिन सी, केरोटिनाईड, बायोफ्लेविनाईड हुन्छ जसले रक्त प्रबाहलाई तीब्र बनाई रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ।
भुटेको मकैले कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियन्त्रण गर्छ जसले मुटु रोगको खतराबाट बचाउँछ। भुटेको मकैलाई तातो पानीमा केही बेर उमाल्नुहोस। यस पानीलाई छानेर मिश्रि मिसाएर खाँदा पिसाब पोलेको वा किड्नीको समस्या समाधान हुन्छ। भुटेको वा पोलेको मकैमा कार्बोहाइड्रेडको मात्र पर्याप्त हुन्छ। जसले शरिरलाई पर्याप्त उर्जा दिन्छ।
पिठ्युँमा बच्चा बोकेर काम गर्ने अर्जुन बि.क को श्रीमती लाई खोजेर ल्याए पत्रकारले, श्रीमतीले बोलेका कुराले सबै परे अचम्मित (भिडियो)
वर्षा राउतले रुँदै भनिन् लिपुलेक जान तयार छु ( ताजा अन्तर्वार्ता )
पारश शाह र सोनिकाको कि स भाईरल, सोनिकालाई दिए हिराको हार (भिडियोमा सबै)